Home » Akụkọ ụgbọ elu » Allegiant na-ekwupụta ọkwa ọhụrụ Onye isi ala / Ndụmọdụ Ndụmọdụ
Rob Goldberg kwalitere n'ọkwa nke onye isi osote onye isi ala / onye ndụmọdụ ndụmọdụ dị elu
Goldberg bụ ọkachamara na ego ụlọ ọrụ na iwu nchekwa
Goldberg sonyeere Allegiant na 2017 mgbe ọ rụchara ọrụ dị ka ndụmọdụ na mpụga maka ihe karịrị afọ 15
Goldberg nwere ihe karịrị afọ 40 nke ahụmịhe gbasara omume
Allegiant taa mara ọkwa Rob Goldberg akwalitela n'ọkwa onye isi osote onye isi oche / onye ọka iwu dị elu. Goldberg bụ ọkachamara na ego na ụlọ ọrụ nchekwa. O sonyeere Allegiant na 2017 dị ka osote onye isi oche / onye ndụmọdụ ndụmọdụ mgbe ọ rụchara ọrụ dị ka ndụmọdụ na mpụga maka ụlọ ọrụ ahụ ihe karịrị afọ 15. Ọ na-ejekwa ozi dị ka odeakwụkwọ nke Board of Directors nke ụlọ ọrụ ahụ.
"Afọ iri nke ahụmịhe nke Rob na ụlọ ọrụ ụgbọ elu, yana ọkachamara pụrụ iche ya na iwu nchekwa na azụmahịa na-eme ka ọ bụrụ onye otu bara uru bara ụba na otu anyị," ka Allegiant Onye isi ala John Redmond. “Ọrụ ya abụwo ihe dị mkpa na mmepe nke Allegiant kemgbe mmalite afọ 2000, na nka ya na ọrụ nlekọta ya ga-aga n’ihu na-elekọta ụlọ ọrụ ahụ nke ọma site na usoro uto anyị na-esote.”
Goldberg nwere ihe karịrị afọ 40 nke ahụmịhe gbasara omume. Tupu ọ sonye na Allegiant, ọ bụ onye ọlụlụ na ụlọ ọrụ iwu Ellis Funk, PC, nke dị na Atlanta, Ga. N'oge ọrụ ya, Goldberg ewerela ụgbọ elu atọ dị iche iche n'ihu ọha - Atlantic Southeast Airlines na 1982, ValuJet Airlines na 1994, na Allegiant Air na 2006.
Onye gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Virginia School of Law na Emory University Business School, Goldberg kwetara na ụlọ mmanya na Georgia, South Carolina na Nevada.